“Wax badan ayaan ku bartay Barcelona” – Jose Mourinho – Gool FM
“Wax badan ayaan ku bartay Barcelona” – Jose Mourinho
(London) 16 Juun 2020. Inkastoo Jose Mourinho xafiiltan qaraar uu la wadaagay kooxda Barcelona muddadii uu macallinka u ahaa kooxda Real Madrid, misena waxaa jira taariikh kalgaceyl leh oo ka dhexeysa macallinka Tottenham Hotspur iyo kooxda reer Spain.
Jose ayaa shaqooyinka macallin xigeenka iyo tarjumaanka ka noqday kooxda reer Spain isagoo ka soo hoos shaqeeyay macallimiinta kala ah Bobby Robson iyo Louis Van Gaal.
Macallinka reer Portugal ayaa ku faanay waqtigiisii Barca iyo la shaqeynta macallimiintii uu caawiyaha u ahaa, waxaana uu ku tilmaamay labo ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan dunida, si la mid ah inay xerada tababarka wadaageen xiddigo waaweyn.
“Barca waa koox leh falsafad cajiib ah oo ku aaddan sida loo ciyaaro, howl karnimada iyo inay tartamaan” ayuu yiri Mourinho.
“Xilligaas waxay ahayd xilli ay ahayd inaan muujiyo sida aan ugu qalmo garab joogista qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan, balse inaan wax barto ma aysan joogsan.
“Waxay ahayd cajiib inaan la shaqeeyo ciyaartoy wanaagsan Stoickhov, Figo iyo Ronaldo, si la mid ah tababareyaal waaweyn sida Robson iyo Van Gaal” ayuu yiri macallinka kooxda Spurs.